सबै वित्तिय सूचकहरुमा एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड अग्रणी स्थान ओगट्न सफलः २७ वाणिज्य बैंक मध्येकै कान्छा सीइओ न्यौपानेको दुरगामी सोचकै कारण बैंकले मार्यो फड्को ? - Aathikbazarnews.com सबै वित्तिय सूचकहरुमा एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड अग्रणी स्थान ओगट्न सफलः २७ वाणिज्य बैंक मध्येकै कान्छा सीइओ न्यौपानेको दुरगामी सोचकै कारण बैंकले मार्यो फड्को ? -
पूरानो नबिल बैंक, ठूलो पूजी भएको ग्लोबल आईएमई बैंक र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई चुनौती दिँदै आएको एनआईसी एशिया बैंकको पछिल्लो प्रगति लोभ लाग्दो छ भन्दा फरक पर्दैन । एनआईसी एशिया बैंकको निक्षेप संकलन, खुद नाफा, प्रति शेयर आम्दानी, डिजिटल बैंकिङ्ग र शाखा सञ्जालमा लोभ लाग्दो मात्रै छैन २६ वाणिज्य बैंकहरुले सिक्ने शिक्षा जस्तो छ भन्दा अब चाहि अन्यथा नहोला । भनिन्छ कर्जा प्रवाहमा सरल प्रकृया खाता सञ्चालनमा सहजता, डेविट र मोबाइल बैंकिङ्ग र डिजिटल डिपोजिटमा समेत अग्रणी स्थान एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बनाएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुका सीइओहरुमध्ये उमेरमा कान्छा सीइओ रोशन कुमार न्यौपाने र उनीको युवा टिमकै कारण बैंकले छोटो समयमा सबै सूचकहरुमा छलाङ्ग मारेको भेटिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोषको कर्जा माछापुच्छ्रेबाट तिर्न सकिने
बूढानीलकण्ठको वडा कार्यालयको शौचालयमा शव